Mayelana NATHI - IShijiazhuang Enric Gas Equipment Co, Ltd.
IShijiazhuang Enric Gas Equipment Co, Ltd. (Enric), izibophezele ekwenzeni futhi inikele ngesezingeni eliphakeme futhi inokwethenjelwa kwengcindezi ephezulu kanye nemishini ye-cryogenic ukuze ihlangabezane nazo zonke izidingo zakho zokugcina nokuhamba, okusebenza kakhulu izimboni zamandla ahlanzekile we-CNG / Ama-LNG ne-hydrogen, ama-semiconductor nama-Photovoltaics Industries, kanye nePetrochemical Imboni, njll.
U-Enric wasungulwa ngonyaka ka-1970, wabhalwa ebhodini elikhulu leHong Kong Stock Exchange (HK3899) ngonyaka ka-2005. Njengomakhi wemishini wamandla okhiye, insizakalo yokunjiniyela nobunjiniyela bezinhlelo, wajoyina inkampani yeqembu leCIMC Group (China International Marine Container Group Company) e 2007. Ingqikithi yemali ephuma ngayo ngonyaka yeCIMC Group icishe ibe yi-1.5billion dollar yaseMelika ngonyaka.
Thembela kunethiwekhi yethu yomhlaba jikelele ye-CIMC Group kanye nezinzuzo ekuphathweni okukhulu kokwenza izinto, Imiklamo ye-Enric futhi yenza imikhiqizo ngokuhambisana namazinga noma imithetho ye-GB, ISO, EN, PED / TPED, ADR, USDOT, KGS, PESO, OTTC njll. Isidingo esiklanyelwe sokubala okuqondiwe. Futhi iminyaka, i-Enric futhi igcina ukubambisana okusondelene namakhasimende ethu nokubanikeza hhayi kuphela imikhiqizo esezingeni eliphezulu kepha nezixazululo ezikhethiwe:
- Ngomkhakha wegesi yemvelo: kususelwa kwimikhiqizo ye-CNG neye-LNG, sinikezela ngezinsizakalo ze-EPC zesiteshi sokucindezelwa se-CNG, isixazululo sokulethwa kwe-Marine CNG Solution, isixazululo sezinto zokuhamba ze-LNG eziningi, ukutholwa kwe-LNG, isiteshi sokuphehla ngamandla se-LNG, uhlelo lwerhasi lNG kabusha, njll;
- Kwensimu ye-Hydrogen energy: sinikezela nge-H2 tube trailer, i-H2 skid station station, Amabhange weSitoreji esiteshini.
- Komunye imboni yamagesi, sinikezela ngemishini yegesi yokuthwala i-H2, He, N2, CH4, NF3, BF3, SH4, HCl, VDF, WF6, njll., Yezimboni eziningi, kubandakanya i-semiconductor, i-photovoltages, njll, futhi esebenza ezempi kanye ne-aerospace izinkambu njll.
- Futhi sihlinzeka ngezixazululo zamathangi amaningi embonini yePetrochemical
Imikhiqizo yethu ime endaweni ehamba phambili ezimbonini ezifanele zomhlaba wonke. Amukelwa ngamakhasimende ethu njengomphathina wawo weqhinga lebhizinisi lokuthuthuka kwezimali zebhizinisi.
Umbono: Ukuze ube njengomakhi wemishini ohlonishwayo womhlaba wonke kanye nomhlinzeki wezixazululo wokugcina amagesi nezimboni zokuhamba.